Haddaynu Rabno In Aynu Hore U Socon, Aynu Dumino Darbiyada Establisment-Ka? - Ilays News
[ July 16, 2021 ] ” Waa In Qisaas Dil Ah Lugu Fuliya Ragii Hargeysa Ku Kufsaday Gabadha..” Sh Aadan Siiro + [ Muuqaal ]	Featured
[ June 6, 2021 ] Kominshanka Oo Ku Dhawaaqay Natiijada Hordhaca Ah Ee Golaha Degaanka Hargeysa iyo Wakiilada Gobolka M/Jeex	Featured
[ June 3, 2021 ] Daawo :- Natiijada Hordhaca Ee Golaha Wakiilada Gobalka Sool	Featured
[ May 31, 2021 ] Shacabka Somaliland Oo Maanta U Dareeray Gobaha Codbixinta Golyaasha Degaanka Iyo Wakiilada	Featured
[ May 24, 2021 ] ” Xisbiga UCID 20 Sanno Ayuu Jiray Maalina Muu Guuleysan , Xisbiga Waddani-na Waa Layli ..” Madaxweyne Muuse Biixi + [ Muuqaal ]	Featured
Haddaynu Rabno In Aynu Hore U Socon, Aynu Dumino Darbiyada Establisment-Ka?
Maxaan uga jeednaa Establishment-ka?; waan ka xumahay wali uma helin kalmad aan ku turjumo Ahmed Ibrahim Awale and Axmed-xiis Dharbaan, your help, please in this regard); xagga qaamuuska Englishka, macnayaal badan bay kalmaddu leedahay, laakiin macnaha innagu aynu maanta ka hadlaynaa waa figradaha soo jireenka ah ee loo qaatay in ay sax ama waxtar yihiin, laakiin xaqiiqadu tahay in ay hagardaamo yihiin; markaad duminayso darbigaa waxa kale oo kaa hor imanaya dadkii danta ku qabay Establishment-ka; la soco!!!
Establishment-ku wuxu ka jiraa arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha intaba; matalan, kan siyaasadda waxan tusaale u soo qaadan karnaa Ahmed Abbey, markuu dawladdii Ethiopia oo ahayd dawlad
cabsi iyo cabsi galin ku soo noolayd ee ahayd dawlad Security oo dadkeeda iyo dadka dunidaba difaac kaga jirtay uu ka furay bacdii ee uu yidhi jabhadihiii oo dhan soo gala, ee u yidhi saxaafaddii waxad doontaan qora, ee uu yidhi ajaanibkoo dhami fiise la’aan ha ku soo galaan; ee uu yiidhi Eritaria siiya dhulkeeda; taasi waa xidid siib uu ku sameeyay Establishmentkii ama hab fikir dawladeedkii Ethiopia ee soo jireenka ahaa.
Hal tusaale oo kale oo establishment-ka ah oo markan Social ah aan bixiyo; macalinna wax ka tusaale badane; matalan dumarku waxay rabaan mise la rabnaa (ma garanayo, wallahi) in ay ka qayb qaataan siyasadda; su’aashu waxa weeye inta Qouto loo raadinayo dumarka, maxay iyagubu isu dooran waayeen, iyagaaba u badan cod bixiyayaasha’e; qaar baa sidaa ku canaanta dumarka; miyaad garanaysaa waxa hortaagan? waa Establishmentka; iyaga laftooda ayuu Establishmetnku ka dhaadhiciyay in aan dumar la dooran; dhiigooda ayay ku jirtaa baan odhan lahaa, haddii aanan buubuunin ka baqayn; dee illaa establishmentkaas la dumiyo isma dooran karaan?; iyagaaba sida fikirka (carriers), taasna ma wax sahlan baad moodaysaa; ta siyaasadda ee Ahmed Abbey sameeyay ayaa ka fudud; tani waa Social, dabarro dhaqan iyo diimeed bay leedahay; sidaa darteed tan oo kale waa in laga baaraan degaa; laakiin ta siyaasadda maantadaa ayaynu ku kicin karnaa?!!!
Aan biyo dhacee, waxan u socday maanta ma duminaa Establishment-ka dhigaya in aan dawladaha iyo siyaasadda waxba laga qorin, oo sir laga dhigo wax alla wixii la xidhiidha Madaxweyne iyo wasiir iyo xafiis dawladeed; Establishment-ku sidaas buu dhigayaa; ma qallibnaa; si nabarka malaxdu uga timaaddo oo hore uu inoogu bogsado; waxa igaga daran sida qaar badani isugu qaldayaan ummuuraha; anigu ma akhriyin buugga xirsi, laakiin dadka leh sir buu sheegay; waar ninku miyuu ka hadlay nolosha gaarka ah ee Madaxweynaha (private life), mise wuxu ka hadlaya sidii wax loo xukumi jiray (public life); matalan, ta caafimaadka, qaar baan arkayay bar-bardhigay Dr Gabboose iyo Siyaad Barre; waar waxa shaqo isku leh ma aha labadaasi; waxay kala yihiin caafimaad iyo siyaaasad; caafimaadka wixii saamayn siyasadeed leh, siyaasigu wuu ka hadli karaa; dhaqtarka isaga waxbaa xidhaya; qaar kale ayaa soo qaatey Cawke iyo Siyad Barre; waar Cawke (AHU), muu qaldamin kaliya inuu Siyad Barre asturo; ee mar labaad waxan leeyahay waa fursad seegtay!!!
Cabdo; u dhaq-dhaqaaqa arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga